Ny Maison des élus eto Antsohihy no nandray ny Filankevitry ny Minisitra manokana (Conseil des Ministres restreint) androany 15 Oktobra 2020 taorian’ny fankalazana ny faha 14 Oktobra 1958, nanaovana sonia ny maha Repoblika an’i Madagasikara. Filankevitry ny Minisitra izay nialoha ny Filankevitry ny Governoram-paritra voalohany, izay notarihin’ny Filoha Andry Rajoelina, natrehin’ny Praiminisitra sy ireo Minisitra mpikambana ao amin’ny Governemanta tany antoerana.
FAMETRAHANA SY FAMPANDEHANANA NY CENTRE DE REHABILITATION NUTRITIONNELLE INTENSIVE ET MEDICALE ATAO ANY ATSIMO HIADIANA AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO:
Ny Filankevitry ny Minisitra no hanapaka ireo fandaniam-bola sy fampiasana rehetra entina miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny faritra Atsimo amin’ny alalan’ny fametrahana ilay « Centre de Réhabilitation Nutritionnelle Intensive et Médicale » hajoro any amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy. Nampahafantarin’ny Praiminisitra androany fa misy ny vola azo avy tamin’ny Africain Risk Capacity, izay nandoavantsika saram-piantohana isan-taona ka nanefan’izy ireo ny saram-piantohana vokatry ny haintany mitranga any Atsimo ankehitriny. Mitentina 8,2 miliara ariary izany ary natokana tanteraka amin’ny fanafoanana ny tsy fanjarian-tsakafo any Atsimo. Voakasik’izany ny fanomezan-drano fisotro madio ny mponina, ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana, ny fanampiana sy fitsinjovana ireo tena marefo, ny fikarakarana ireo iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo.
Ireo minisitra isan-tokony, araka ny sehatra iadidiany avy no hitondra ny volavolan’asa sy tetikasa ary volavolam-pandaniam-bola eo anatrehan’ny Filankevitry ny Minisitra amin’ny herinandro ambony, mba ho tena zavatra mivaingana sy maharitra ary misy fiantraikany mivantana amin’ireo iharan’ny tsy fanjarian-tsakafo no entin’izy ireo amin’izany ary handraisana ny fanapahan-kevitra sy ny fampiasam-bola.
FAMPANDEHANANA SY FANDRINDRANA NY PMDU (Plan Multisectoriel d’Urgence):
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny fametrahana ny komity mandrindra ny PMDU izay tarihin’ny Praminisitra lehiben’ny Governemanta araka ny fanapahan’ny Filankevitry ny Minisitra ny 01 Jolay 2020. Ny fanaraha-maso ny asa efa natao sy an-dalam-panatanterahana no andraikitr’ity Komity mpandrindra ity fa ny fanatontosana ireo vinan’asa sy drafitra voasoritra ao anatin’ny PMDU kosa dia anjaran’ireo ministera voakasik’izany.
Araka ny tolo-kevitry ny Ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola :
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny volavolan-dalàna mamaritra ny fampindramam-bola nomen’ny Banky Afrikana mikasika ny Fampandrosoana (BAD) entina miady amin’ny valan’aretina COVID-19, natao sonia ny 07 aogositra 2020.
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra toy izany koa ny volavolan-dalàna mamaritra ny fampindramam-bola mikasika « Opération d’appui budgétaire en gestion des risques de catastrophes avec option de tirage différé (CAT DDO) », izay natao sonia ny 06 aogositra 2020 teo amin’ny Repoblikan’i Madagasikara sy ny AFD.
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra toy izany ihany koa ny fampindramam-bola natao ho an’ny « Programme d’Appui des politiques de développement pour la riposte à la pandémie de COVID-19 eto Madagasikara, izay natao sonia ny 08 septembra 2020 teo amintsika sy ny IDA.
Marihana fa aroso eny anivon’ny Antenimieram-pirenena ireo volavolan- dalàna ireo amin’ny fivoriana ara-potoanan’ny Antenimiera ho avy izao.
Ramatoa RAKOTOVAO Nina Adèle, dia vaotendry ho Talem-paritra misahana ny fonja any Itasy.
Atoa RANDRIANASANDRATRA Franco Liva Gabriel, dia vaotendry ho Talem-paritra misahana ny fonja any Androy.
Atoa RANDRIAHERISOLO Maminirina Denis, dia voatendry ho Tale jeneralin’ny Fanofanana arak’asa.
Atoa RAHARISON Tolojanahary Andry Rakotonaivo, dia voatendry ho Tale misahana ny serasera.
Atoa RABEARISOA Rado Lalao, dia vaotendry ho Tale misahana ny « Centre d’Appui à la Formation Professionnelle et Agricole » ao Ambohitsilaozana.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fitaterana, Fizahantany ary ny Famatarana ny Toetrandro :
Mme. RAKOTOMALALA Dina Hariniry, doa voatendry ho Tale Jeneralin’ny Fitanterana.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Asa, ny Fampanana asa, ny asam- panjakana ary ny Lalàna sosialy :
Atoa MALO Orlando Delphin, dia voatendry ho Talem-paritra ao Androy.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Tontolo Iainana ary ny Fampandrosoana lovain-jafy:
Atoa M. RAKOTOARISOA Julien Noêl, dia voatendry ho tale Jeneralin’ny « Gouvernance Environnementale ».
Natao androany faha 15 Oktobra 2020
12 juin 2021 : Colloque régional pour l’émergence du sud de Madagascar Tolagnaro (suite 3)